श्रीमति पोइला गएको सहन नसकेपछि गरे यस्तो अचम्म्काे हर्कत, प्रहरी नै चकित! – PathivaraOnline
Home > रोचक > श्रीमति पोइला गएको सहन नसकेपछि गरे यस्तो अचम्म्काे हर्कत, प्रहरी नै चकित!
admin September 29, 2020 रोचक	0
एजेन्सी । श्रीमती पोइल गएको सहन गर्न नसकेर एक युवकले श्रीमतीको नयाँ श्रीमानको गोप्य अंग का’टि’दिएका छन् । अनि आफुले पनि नदिमा हाम फालेका छन् । आफुले माया गरेकी श्रीमतीले धो’का दिएर अर्कैसंग गएपछि उनले यस्तो गरेका हुन् । श्रीमती कहाँ जान्छिन् भनेर पत्ता लगाउन उनले उनको कारमा जिपिएस लगाएका थिए । त्यसैवाट उनले पत्नीको सबै कृयाकलाप निगरानी गरेका थिए । समाचारकाे भिडियो हर्न तल क्लिक गर्नुहाेस
यिनी कस्ती शिक्षिका हुन? जस्ले कलिला विद्यार्थीबाट यसरी यौन प्यास मेटाउथिन्
सुन र हिराबाट बनेको ‘बुलेट प्रुफ’ सिसा जडित ट्वाइलेट